သက်ဝေ: တိမ်တွေ လှသောနေ့
Posted by သက်ဝေ at 1:40 PM
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ March 5, 2010 at 2:01 PM
ပန်းခရမ်းပြာ March 5, 2010 at 2:06 PM
ကော်ဖီ ကောင်းကောင်း သောက်ပြီး
ဘာတွေ လွင့်ပစ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေပါတယ်။
(ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး နှစ်ကျပ်ခွဲကြီးနဲ့ လက်စွမ်းပြဦးမယ် ထင်နေတာ။)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း March 5, 2010 at 2:13 PM
ဒီလိုနဲ့ ညာစားနေရတာ...( သူများလင်မယားကြားဝင်မပါဘူးနော်..း)))
SDL March 5, 2010 at 2:28 PM
နှစ်ရက်စာချက်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲခွဲသိမ်းထားတဲ့ဟင်းတွေ လစ်ရင်လစ်သလို လွှင့်ပစ်လို့ ရင်နာရတာ ခဏခဏ..။
SDL March 5, 2010 at 2:32 PM
ဟူသည် ရေးတာ ယူသည်ဖြစ်သွားပါလား.... :(
Nge Naing March 5, 2010 at 2:42 PM
မသက်ဝေ အိမ်ကတယေက်လည်း ဒီလိုပဲ။ အိမ်မှာ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပွတယ်ဆိုပြီး အမှိုက်ပုံးထဲ သွားပစ်ချထားလုိ့ ပိုက်ဆံတောင် အမိုက်ပုံးထဲက ပြန်သွားရှာရဖူးတယ်။တော်သေးတယ် ကောင်စီက အမှိုက်လာသိမ်းတဲ့နေ့မဟုတ်လို့။ နောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်မစာအုပ်ပုံတ၀ိုက် ဘယ်လောက်ပဲ ပွပွ အဲဒီမှာ ရှိတာတွေကို လုံးဝ လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိနဲ့လို့မှာထားရတယ်။
P.Ti March 5, 2010 at 2:53 PM
ကျွန်တော်လည်း မျက်စိထဲရှုပ်ရင် လွှင့်ပစ်လိုက်တာပဲ။ ပြီးမှ လိုချင်ရင် မရှိတော့ဘူး ...
အမ... ကိုကြီး ပစ္စည်းတွေ လွှင့်ပစ်နေလို့ စိတ်ညစ်တာကိုပြောချင်တာလား အမကို ဘယ်တော့မှ လွှင့်မပစ်ဘူးဆိုတာကို ကြည်နူးနေလို့ ကြွားချင်တာလား ဟင်း... သိတယ်နော် :D
ဟယ်များ ကိုများစောင်းရေးနေလား။ ကိုကြိးနဲ့ တူသွားပြီ။ မျက်စိထဲရှင်းရင်ပြီးရော အကုန်ပစ်လိုက်တာပဲ။
thesnowynight@gmail.com March 5, 2010 at 3:10 PM
Glacier March 5, 2010 at 3:28 PM
YTU ရဲ့စာအုပ်ကိုလည်း ဖတ်ကြည့်ချင်သေးတယ်။
Bino March 5, 2010 at 3:40 PM
I gotareaction from your emotion.
nu-san March 5, 2010 at 4:15 PM
မမရေ.. ပစ္စည်းအသစ်ဝယ်တိုင်း အဟောင်းတွေ လွှင့်ပစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ စင်ကာပူမှာသာ နေမယ်ဆိုရင် မမတို့ အိမ်နားမှာ နေတယ်.. အမှိုက်ပစ်တဲ့အချိန် စောင့်ပြီး ကောက်ယုံပဲ.. ;P
နောက်ဆုံး စာပိုဒ်လေးဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ.. မမ ကို ဘယ်တော့မှ ဘယ်တော့မှ မလွှင့်ပစ်ပါဘူးတဲ့လား.. အဟိ..:)
Kay March 5, 2010 at 4:22 PM
အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါကြောင်း...( မသက်ဝေ ကို မဟုတ်)း)
ကိုယ်တိုင် မိန်းကလေး ပေမဲ့..အိတ်တွေ များ..ဖိနပ်တွေများ.. ထပ်ကာ ထပ်ကာ ၀ယ်သော သူများအား.. ပတ်ဝန်းကျင် နေရာ ယူမူ နဲ့.. အရေးယူ ချင်ပါသည်။း)
သက်ဝေ March 5, 2010 at 5:03 PM
ရွာသားလေး... ကိုကြီး ကြားအောင် အော်ပါ...း))
မချို... အခုတလော ရွာလည်နေလို့ လက်စွမ်းမပြနိုင်သေးဘူး...
ကိုကြီးကျောက်... ကြား သုံး ကြား နော်... ဟဲဟဲ
စင်စင် နဲ့ မငယ်... အဲဒါတွေလဲ တူတယ်... သိပ်ရှည်သွားမှာစိုး၍ ချန်လှပ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်... စိတ်ပါလျှင် အပိုင်း ၂ လာမည်...း))
ကိုပီတိ... သိရင် တိတ်တိတ်နေပါ...း))
မွန်... သာမီး ကြောက်ကြောက်...
The snow Night, Glacier & Ko Bino... Thanksalot...
နုစံ ညီမ... သမီးလေး အိပ်နေတုန်း ဘလော့ဂ်လည် ထွက်တယ်ပေါ့လေ... သတိရနေတယ်...
ကေ အစုတ်ပလုပ်လေး... ရိုက်ခံရမယ်နော် ဟွန်း...
ချစ်စရာ မှတ်ချက်လေးများနှင့်အတူ စာလာဖတ်သူများအား ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါသည်...။ ကောင်းသော သောကြာည နှင့် အနားရသော ပိတ်ရက် နှစ်ရက် ဖြစ်ကြပါစေ...
Anonymous March 5, 2010 at 5:42 PM
မကေနဲ့ ကျမနဲ့ တူတယ်။
ကိုကြီးနဲ့လည်း တူတယ်။ ကျမက မျက်စိရှုတ်တာ အကုန် လွှင့်ပစ်တယ်။
ကိုကြီးနဲ့ ကိုကိုမောင်မောင်ဆရာနဲ့ ဈေးဝယ်တတ်တာ တူတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပို့စ်က ကိုကြီး မသက်ဝေကို မလွှင့်ပစ်ပါကြောင်း ပျော်လွန်းလို့ ပီတိနဲ့ ကြွားတဲ့ ပို့စ်ကြီး ဟင်းဟင်းဟင်း။
Thant March 5, 2010 at 6:10 PM
သန့်လဲ မျက်စိထဲပိုနေတယ်ထင်တာမှန်သမျှ လွှင့်ပစ်တာပဲ....ဒီတစ်ခေါက်အိမ်ပြန်တော့တောင် ယူ လွှင့်ပစ်လို့မေမေက ဒီအကျင့်မပျောက်သေးဘူးလားတဲ့... :D
****အစ်မကြွားတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်သွားတယ်.... :P
Vista March 5, 2010 at 6:25 PM
လွှင့်ပစ်တတ်တာကို အနော်နဲ့ တူတယ်လို့ ရေးရမလား။
မလွှင့်ပစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အကို ပြောတာကို လိုက်ရေးရမလား ။
ဖတ်လို့ တော့ အရမ်းကောင်းပဲ။
ချစ်ကြည်အေး March 5, 2010 at 6:38 PM
သေချာပါတယ်ဟာ...နင့် ကိုယ်လုံးက အမှိုက်ပစ်တဲ့ အပေါက်နဲ့ မဆန့်သေးလို့ပါ...ငါနဲ့ တွေ့မှ နည်းပေးလိုက်ပါအုန်းမယ် ၃ပိုင်း ပိုင်းရင်တော့ ဆန့်နိူင်လောက်တယ်လို့...:)
(ဟယ် ဘာတွေများ ပြောနေမိပါလိမ့်......)
လင်းဒီပ March 5, 2010 at 6:47 PM
ဖတ်နေရင်းနဲ့ နောက်မယ်လို့ စဉ်းစားနေတာ ..နောက်စရာမလိုအောင် တခြားလူတွေက ဦးအောင် နောက်သွားပြီ ။
“အသစ်တွေ ဝယ်လာ၊ ရလာတိုင်း အဟောင်းတွေကို လွှင့်ပစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ သူ နောက်တယောက် အသစ်မတွေ့သေးလို့ နင့်ကို မလွှင့်ပစ်သေးတာ နေမှာပါ တဲ့…။”
အချစ်ဆိုတာကတော့ ဘယ်တော့မှ မဟောင်းပါဘူး
ချစ်လေ သစ်လေ ပါပဲ ။
Hmoo March 5, 2010 at 10:01 PM
T T Sweet March 5, 2010 at 11:07 PM
များတို့ဖြင့် မယုံပေါင် ... အမှိုက်ပုံးမဆန့်သေးလို့ဖြစ်မယ် ...ဟားဟား ... ဟိုမယ် ရွာသားလေးပြောနေတယ်လေ ... လူတစ်ယောက်လုံး အမှိုက်ပုံးထဲ ပစ်ချနည်းစာအုပ်ရှိသတဲ့ ... KAxx ကို ငှါးခိုင်းလိုက်မယ်နော် ...
သူများတွေ ကြည်နူးနေတာ မနာလိုလို့ ရေးသွားသည် ...း)))
အပြုံးပန်း March 5, 2010 at 11:16 PM
တိမ်တွေ အရမ်းလှနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ :P
(ဒီနေ့ esplanade ရောက်ခဲ့တယ်၊ မသက်ဝေက ဓါတ်ပုံကို ဘယ်နေရာလောက်က ရိုက်တာဆိုပြီး ပြောဖြစ်ကြတယ်၊ ဒီနေ့ တိမ်တွေ အဲဒီလို ပြာမနေဘူး)
sonata-cantata March 5, 2010 at 11:41 PM
မေဇင် March 6, 2010 at 12:45 PM
ပျော်စရာကောင်းတယ်..ဖတ်ရတာ ကြည်နူးတယ်။ ဖတ်လို့လဲ ကောင်းတယ်။
မမသီရိ March 6, 2010 at 4:47 PM
မမဆီမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်က စာအုပ်တွေရှိတယ် တချှို့ အ၀တ်အစားတွေရှိတယ်.. လေးတန်းတုန်းကစပြီး၁၀ တန်းထိ ရေးတဲ့ စာစီစာကုံးစာအုပ်တွေရှိတယ်.. လက်သဲဆိုးဆေးဗူးခွံတွေရှိတယ်
မိပ်ကပ်ဗူးခွံတွေရှိတယ်..း(..... အခန်းထဲ မှာ ရှုပ်ပွ နေတာ.. :P
ရွှန်းမီ March 6, 2010 at 7:50 PM
နှမြောစရာ.. ဒါပေမယ့် ပြုံးစရာ...း)
Moe Cho Thinn March 7, 2010 at 11:05 AM
ကိုကြီးးး အမှန်ခြစ် အကြီးကြီး တမှတ်။
(ဟွန်းး သူ့ညီမ အတိုင်းပဲ)
Moe Cho Thinn March 7, 2010 at 11:06 AM
ပြောဖို့ မေ့လို့ ထပ်လာပြောတယ်။
ချိုသင်းလဲ ကိုကြီးနဲ့ တဂိုဏ်းတည်းသမား။
သက်ဝေ March 8, 2010 at 1:42 PM
မအယ်... တော်တော် တူတယ်ဆိုတော့ တွေ့ချင်သွားပြီ...
သန့်ကလေး... ဆိုးတယ်နော်... ဟွန်း...
Vista... ကျေးဇူးပါ ညီမရေ...
ချစ်ကြည် နဲ့ တီတီဆွိ... တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ...
လင်းဒီပ... ကြိုက်သွားပြီ... ချစ်လေ သစ်လေ တဲ့...
ပေါက်... မလိုရင်တော့ ပစ်ရမှာပေါ့လေ...
Hmoo... ဘာပြောသွားတာလဲ... နားလည်ဝူး...း))
အပြုံးပန်း၊ မသီတာ၊ မေဇင် နဲ့ ရွှမ်းမီ... ကျေးဇူး...း))
မမသီရိ... ကိုယ်လဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ကိုယ်သံယောဇဉ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို သိမ်းတတ်ပါတယ်...း))
ချိုသင်း... ကိုကြီးက ဖတ်ပြီး ရယ်နေတယ်...း))
စာလာဖတ်ကြသူများနှင့် ချစ်စရာ မှတ်ချက်လေးများ ချန်ထားခဲ့ကြသူများ အားလုံးကို ချစ်ခင် ကျေးဇူးတင်လျှက်...
Hmoo March 9, 2010 at 1:55 AM
ဪအဟောင်းတွေဆိုတာတန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့။ အကုန်ကြခံပြီးပြတိုက်တွေဆောက်ပေးရတာဘဲကြည့်လေ၊ ဟူးမောလိုက်တာကွာ၊
Hmoo March 9, 2010 at 2:00 AM
blueskyforest March 9, 2010 at 10:29 AM
စင်္ကာပူညဓါတ်ပုံများ သိပ်မိုက်ပါတယ်။ တိမ်တွေလှတဲ့အကြောင်းတော့ နောက်မှပဲဖတ်တော့မယ် ရှည်လို့။ တိမ်တွေလှတာ လူတွေသိပ်မသိကြ ရှာဘူး။ ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ဖို့ သတိမရကြလို့ ။ သက်ဝေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေ။
သက်ဝေ March 9, 2010 at 10:33 PM
အခုလို အမောခံပြီး သေသေချာချာ ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားတဲ့ Hmooကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဓါတ်ပုံ အကြောင်း မှတ်ချက်ကို တိမ်တွေဆီမှာ လာရေးပြီး တိမ်တွေ အကြောင်းကိုကျတော့ ရှည်လို့ ဖတ်မသွားဘူးတဲ့...
ဆိုးတဲ့ ကိုဘလူးစကိုင်းပဲ... ဆိုးပေမယ့်လဲ ကျေးဇူးတော့ တင်ပါတယ်...
ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာ စာတွေ များများ ရေးနိုင်စေ...း))
khin oo may March 14, 2010 at 1:38 AM
ပုံရိပ် March 14, 2010 at 10:53 AM
အချစ်ဆိုတာ လွှင့်ပစ်လို့ ရကောင်းတဲ့ အရာမှ မဟုတ်ပဲလေ။ (ဟဲ..ဟဲ)
ဇွန်မိုးစက် March 20, 2010 at 1:25 AM
စာကြွေးတွေလာရှင်းပါတယ် အစ်မသက်ဝေ။း)
ဇွန်လည်း အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကြိုက်တယ်။ အဲ..လွှင့်ပစ်တာတော့သိပ်အားမသန်ဘူးရယ်။ :D
မောင်မျိုး August 9, 2011 at 1:00 PM
ဒီပို့စ်ဟောင်းလား ခုမှ ဖတ်မိတာ သိပ်ကြည်နူးစရာကောင်းတာပဲး)))